FeatherCoin စျေး - အွန်လိုင်း FTC ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို FeatherCoin (FTC)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ FeatherCoin (FTC) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ FeatherCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $2 234 165.00
volume_24h_usd: $208 940.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ FeatherCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
FeatherCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
FeatherCoinFTC သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.00905FeatherCoinFTC သို့ ယူရိုEUR€0.00767FeatherCoinFTC သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00693FeatherCoinFTC သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.00826FeatherCoinFTC သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0819FeatherCoinFTC သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0571FeatherCoinFTC သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.202FeatherCoinFTC သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0339FeatherCoinFTC သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0121FeatherCoinFTC သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0126FeatherCoinFTC သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.202FeatherCoinFTC သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0701FeatherCoinFTC သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.049FeatherCoinFTC သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.679FeatherCoinFTC သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.1.52FeatherCoinFTC သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0124FeatherCoinFTC သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0137FeatherCoinFTC သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.282FeatherCoinFTC သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.063FeatherCoinFTC သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.958FeatherCoinFTC သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩10.77FeatherCoinFTC သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦3.43FeatherCoinFTC သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.666FeatherCoinFTC သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.25
FeatherCoinFTC သို့ BitcoinBTC0.0000008 FeatherCoinFTC သို့ EthereumETH0.00002 FeatherCoinFTC သို့ LitecoinLTC0.000157 FeatherCoinFTC သို့ DigitalCashDASH0.00009 FeatherCoinFTC သို့ MoneroXMR0.0001 FeatherCoinFTC သို့ NxtNXT0.661 FeatherCoinFTC သို့ Ethereum ClassicETC0.00129 FeatherCoinFTC သို့ DogecoinDOGE2.6 FeatherCoinFTC သို့ ZCashZEC0.0001 FeatherCoinFTC သို့ BitsharesBTS0.356 FeatherCoinFTC သို့ DigiByteDGB0.341 FeatherCoinFTC သို့ RippleXRP0.0309 FeatherCoinFTC သို့ BitcoinDarkBTCD0.000311 FeatherCoinFTC သို့ PeerCoinPPC0.0312 FeatherCoinFTC သို့ CraigsCoinCRAIG4.11 FeatherCoinFTC သို့ BitstakeXBS0.384 FeatherCoinFTC သို့ PayCoinXPY0.157 FeatherCoinFTC သို့ ProsperCoinPRC1.13 FeatherCoinFTC သို့ YbCoinYBC0.000005 FeatherCoinFTC သို့ DarkKushDANK2.89 FeatherCoinFTC သို့ GiveCoinGIVE19.5 FeatherCoinFTC သို့ KoboCoinKOBO2.09 FeatherCoinFTC သို့ DarkTokenDT0.00833 FeatherCoinFTC သို့ CETUS CoinCETI26
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Fri, 07 Aug 2020 20:30:02 +0000.